Music » နားဦးတည့်ရာ နှစ်ဆယ့်ရှစ် – နီနီခင်ဇော် ( မျှော်လင့်ချက်တစုံတရာ)	18
မြစပဲရိုး says: * အကြိမ်ကြိမ် အခါခါရှုံးလဲ
ဇီဇီခင်ဇော် says: ဒီနေ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာ ပြောတဲ့စကား…
ဒီလိုလုံးဝလုံလောက်တဲ့ အပြောင်းအလဲကိုတောင်မှ မထောက်ခံချင်ဘူးဆိုတဲ့ အဓိပ္ပါယ်ကတော့ အပြောင်းအလဲကို မလိုလားဘူးဆိုတဲ့အဓိပ္ပါယ်ကို ရောက်ပုံရပါတယ်၊ ဒီဟာမထောက်ခံတဲ့ ကိုယ်စားလှယ်များဟာ အပြောင်းအလဲကို မလိုလားတာ ဒီပုဒ်မတစ်ခုချင်းတစ်ခုချင်းကို မပြင်ဆင်တာထက် ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ ပြင်ဆင်ထားတာတွေကလည်း လုံလောက်တာမဟုတ်ဘူး၊ ၇၅ ရာခိုင်နှုန်းကနေပြီးတော့ ၇ဝ ရာခိုင်နှုန်းအောက်မကျသောဆိုတာကလည်း ဘာမှထူးခြားတာလည်းမဟုတ်ဘူး…
မြစပဲရိုး says: အဲဒါ မဖတ်ရသေးဘူး။
မြစပဲရိုး says: ကပေါက်ကြီး သူရို့ ပြင်ပေးတဲ့ မုန့်ပွဲ က မသန့်တော့ အဲဒီကနေ ကူးစက်ရောဂါတွေ ဗလပွ နဲ့ နလန်မထနိုင်တော့မှ ခက်ရောဗျာ။
Mike says: .ရှင်းရှင်းလေးပါဗျာ….
မြစပဲရိုး says: ဒါထက် မှန်တာ မရှိတော့ဘူး မိုက်မိုက် ရေ။
အောင် မိုးသူ says: မဲပေးတဲ့နေရာမှာ သေသေချာချာ ပေးမှာပါ။ ကလိန်ကကျစ်တွေ ဘယ်လိုလာဦးမလဲမသိဘူး။
မြစပဲရိုး says: လာမှာ၊ လာမှာ ၊ မပူ နဲ့ မောင်အောင်ရေ။
အရူးမီးဝိုင်း ပုံစံ ကို မြင်နေရတော့တာ။ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 7194
Mike says: .The Voice Weekly
ဦးကြောင်ကြီး says: အန်အယ်လ်ဒီလှော်ဗီ ဒေါမြစာဂ…. လေ
မြစပဲရိုး says: . ရွေးခံရမဲ့ သူ တွေ ကောင်း ရင် တော့ ပိုပြီး လှော်လို့ ကောင်း တာပေါ့ ကြောင်ကြောင် ရယ်။
​ဒေါ် လေး says: အရီး​ရေ
မြစပဲရိုး says: . ဒေါ်လေးရေ အဲဒီ အတုံးတွေ ဖြစ်တာ က ဇော်ဂျီ မရှိလို့ ထင်တယ်။
Ma Ma says: ခုတလော ရွေးကောက်ပွဲနဲ့ပတ်သက်လို့ အသံတွေကြားလာရတာတောင် တော်သေးရဲ့ ပြောရမလို။
ခုလည်း ဒေါ်စု ခေသူမဟုတ်…. လို့။ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 8068
မြစပဲရိုး says: အခုတော့ အဲ့ ပူတင်း ကြီး က ရာဇဝင်လူဆိုးနီးပါး ဖြစ်နေပါပေါ့ ချစ်မမ ရာ။ lol:-)))
စည်းနဲ့ ကမ်းနဲ့ လစ်​ဘရယ်​ ​ယောကျာ်း says: နားဦးတည့်ရာ ၄၃၆
မြစပဲရိုး says: . အေးကွယ်။